Mah Jong Slot - Myanmar Online Game
Mah Jong ဆိုရင်တော့ မသိတဲ့လူမရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ 20 ရာစုအစောပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံ Qing မင်းဆက် အချိန်ဝန်းကျင်မှာ စပြီးဖန်တီးခဲ့တဲ့ အကွက်ချကစားနည်းတစ်ခုပါ။ ကစားသူ ၄ ယောက်နဲ့ကစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဖန်တီးခဲ့ချိန်ကစပြီး လူကြိုက်များအောင်မြင်ပြီးတော့ ယနေ့ခေတ်အထိတောင် မပျောက်ပျက်ပဲ အောင်မြင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီကစားနည်းအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ ကစားနည်းမျိုးစုံ ပေါ်ထွက်လာခြင်းရှိသလိုပဲ Slot ကစားနည်းအနေနဲ့လဲ မြင်ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ 16800x အထိ Top Award ရနိုင်ခွင့်ရှိတယ့် JDBYG ရဲ့ Mah Jong Slot အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကစားနည်းလေးက Row3ခု Reel5ခုနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပေမယ့် အရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့ Payline စနစ်လဲမဟုတ်၊ အရမ်းလဲ မရိုး၊ မနည်းတဲ့ Payline လဲမဟုတ်ပဲ Payline 25 ခုနဲ့ဖန်တီးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် 243 ways ပုံစံမျိုးလဲ အများကြီးရှုပ်မှာမဟုတ်သလို၊ Payline နည်းနည်းလေးလဲမဟုတ်တာကြောင့် ကစားရတာ အတော်အဆင်ပြေစေမှာပါ!
Symbol တွေကလဲ အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Mahjong ကစားနည်းက Symbol တွေကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ Row3– Reel5ခု Slot ဖြစ်တာကြောင့် Symbol နည်းနေရင် ကစားလို့မကောင်းမှာစိုးလို့ ရိုးရိုး Symbol နဲ့ Special Symbol ခွဲပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ရိုးရိုး Symbol မှာတော့ ဖဲချပ် Symbol တွေဖြစ်တဲ့ K, Q, J, 10 တို့ကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီမှာမှ အနည်းဆုံးကတော့ 10 ပါ။ သူက3ခုတူရင် 5,4ခုတူရင် 10,5ခုတူရင် 125 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအနည်းဆုံးကတော့ J ဖြစ်ပြီးတော့သူက3ခုတူရင် 5,4ခုတူရင် 30,5ခုတူရင် 125 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ King နဲ့ Queen ကတော့ အသွင်တူ Payout နှုန်းအတူတူတွေ့ရပြီး သူတို့ ၂ ခုလုံးက3ခုတူရင် 10,4ခုတူရင် 30,5ခုတူရင် 150 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Special Symbol တွေမှာတော့ Mah jong Symbol တွေကိုစပြီးတွေ့လာရပါပြီ။ ဒီမှာမှ ထူးခြားတာက4ခုထပ်ထားတဲ့ Symbol တစ်ခုကိုတွေ့ရမှာပါ။ သူတို့ကတော့ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် လေဟုန် ကိုကိုယ်စားပြုတာကြောင့် တစ်စုထဲတွေ့ရပြီးတော့3ခုတူရင် 10,4ခုတူရင် 60,5ခုတူရင် 200 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့ Symbol က အဖြူရောင်နဂါးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လေးထောင့်ကွက်ပုံစံ Mah Jong Symbol လေးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အများဆုံးပြန်ပေးနိုင်တဲ့ Symbol ၂ ခုကိုတွေ့ရပါပြီ။ သူတို့ကတော့ အနီရောင် နဂါးနဲ့ အစိမ်းရောင်နဂါးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Symbol တွေဖြစ်ပြီးတော့ ၂မျိုးလုံးက အနည်းဆုံး ၂ခုတူတာနဲ့ ပြန်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ အနီရောင်နဂါးက2ခုတူရင် 2,3ခုတူရင် 50,4ခုတူရင် 500,5ခုတူရင် 3000 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်နဂါးကတော့2ခုတူရင် 2,3ခုတူရင် 50,4ခုတူရင် 200,5ခုတူရင် 1500 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Bamboo နံပါတ်တစ် ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ Symbol လေးကနေ ငှက်ကလေးကိုအဓိကအခြေခံပြီး Wild Symbol ကိုတွေ့ရပါတယ်။ Wild ဆိုတာကတော့ ဖဲကစားနည်းမှာဆိုရင် Joker သဘောမျိုးပဲ ကျတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်သလိုအစားထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပ်ါတယ်။ Wild ကရဲ့ပြန်ပေးနှုန်းကလဲ လျော့တွက်လို့တော့မရဘူးနော်။ အနည်းဆုံး ၂ ခုတူတာနဲ့စပေးပြီးတော့2ခုတူရင် 10,3ခုတူရင် 500,4ခုတူရင် 3,000,5ခုတူရင် 10,000 အထိတောင်ပြန်ပေးနိုင်တာပါ! ဆိုလိုတာတော့ Wild က Reel တိုင်းမှာကျနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူအစားထိုးပေးမယ့်အထဲမှာတော့ Free Spin Bonus Symbol မပါပါဘူးနော်။
Free Spin Bonus Symbol ကတော့ Reel 3, 4,5တို့မှာပဲပေါ်နိုင်ပြီးတော့3ခုကျတာနဲ့ Free Spin5ခါရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာထူးခြားတာကတော့ Multiplayer ပါ။ Multiplayer က Random ကျချင်တာကျမှာမဟုတ်ပဲ 1X ကစပြီးတော့ Free Spin တစ်လှည့်စီတိုင်းကို2နဲ့မြှောက်ပြီးတိုးသွားမှာပါ။ ဒီတော့ 8X အထိရမှာလား? မဟုတ်ပါဘူး။ Free Spin လှည့်နေရင်းနဲ့လဲ Free Spin Symbol ထပ်ကျလာနိုင်တာကြောင့် အများဆုံး 25 Free Spin, 64X Multiplayer အထိရနိုင်ပါတယ်!
ကဲ.. ဒါဆိုရင် 16800x အထိရအောင်ကစားဖို့အတွက် တရုတ်ရိုးရာကစားနည်း Mahjong အငွေ့အသက်တွေကြားမှာ Slot ကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား? အခုပဲ JDBYG ရဲ့ Slot Section ကိုလှမ်းခဲ့လိုက်ပါ!
Hi, Neat post. There’saproblem together with your web site in web explorer, might check this?K IE still is the market leader andahuge element of other people will leave out your wonderful writing due to this problem.